Isantya sokukhawulezisa isiqinisi se-PVC kulungiso kunye nemibhobho efana neeprofayili zefestile
Izongezo zePvc ecacileyo
ICalcium Zinc Stabilizer
Inkqubo yokuNceda i-PVC
Isantya sokukhawulezisa isiqinisi se-PVC kulungiso kunye nemibhobho enje ngeefayile zefestile, iifilimu eziqinileyo nezingagungqiyo, iingcingo kunye neentambo, ukutyabeka kunye nokutyibilika kunceda intengiso ukuba inyuse. Izicelo zePvv zithatha iipholima zesiko kunye nezakudala oku kutshintshwa kwee-PVC ngaphezulu kwenkqubo yesiqhelo kukumisela ukukhula kweemarike kwe-PVC somculo ngokucacileyo. Inkqubela phambili kumzi mveliso wokwakha kwimarike yaseAsia-Pacific (APAC) izisa umthamo olungileyo wezabelo kunye nengeniso elungiselela isiseko esinokubakho semarike esixhasa intengiso ye-PVC yozinzo ukuba ichume. Olu phuhliso luvula umnyango wamathuba kubadlali beemarike, ukunyuka kokungena kwabadlali kukumisela umyinge wempumelelo kwimarike yokomeleza i-PVC kwixesha eliqikelelweyo le-2020 ukuya kwi-2027.
Imarike ye-PVC ye-stabilizer iyakufikelela kuqikelelo lwe-USD 5.32 yezigidigidi ngo-2027, ngelixa ibhalisa oku kukhula ngereyithi ye-4.90% kwixesha eliqikelelweyo le-2020 ukuya ku-2027. Abadlali abahlukeneyo beemarike abajolise kuqoqosho olusakhulayo njengeAsia-Pacific (APAC) kunye nokuphuhlisa iipokotho zengingqi le nto ingumgqaliselo ophambili wentengiso ye-PVC yomzinisi kwixesha elilindelekileyo lika-2020 ukuya ku-2027.
Imarike yokuzinza ye-PVC iyahlalutywa kunye nobungakanani bemakethi, ulwazi lwevolumu lubonelelwa ngohlobo lwesicelo selizwe, kunye nomsebenzisi wokugqibela njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Amazwe agqunywe kwingxelo yentengiso ye-PVC yi-US, Canada neMexico eMntla Melika, eJamani, eFrance, e-UK, eNetherlands, eSwitzerland, eBelgium, eRashiya, e-Itali, eSpain, eTurkey, e-Yurophu eYurophu, e-China, eJapan, e-India. , South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) eAsia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, UAE, Israel, Egypt, South Africa, Rest of Middle East naseAfrika. (MEA) njengenxalenye ye-Middle East kunye ne-Afrika (MEA), iBrazil, iArgentina kunye ne-Rest of South America njengenxalenye yoMzantsi Merika.
I-Asia-Pacific (i-APAC) ilawula intengiso ye-PVC kwisithuba esiqikelelweyo se-2020 ukuya kwi-2027 ngenxa yesabelo esikhulu semarike esiqhubekayo kwimizi-mveliso yokwakha epokothweni yase China nase India. I-China ichaza ukuveliswa okuphezulu kwe-PVC yemarike yokuzinzisa ngenxa yokusekwa kwengingqi. Ukuvuma i-India kujongene nemfuno enkulu yesicelo se-PVC ngenxa yenkqubela-phambili eqhubekayo kwicandelo lezolimo, imibhobho kunye neendawo zokuhlala ezikhulayo.
Imarike yokuzinza ye-PVC yahlulwehlulwe ngokwesiseko sohlobo, isicelo kunye nomsebenzisi wokugqibela. Ukukhula phakathi kwamacandelo ahlukeneyo kukunceda ekufumaneni ulwazi olunxulumene nezinto ezahlukeneyo zokukhula ekulindeleke ukuba zixhaphake kuyo yonke imarike kwaye zenze iindlela ezahlukileyo zokunceda ekuchongeni iinkalo zesicelo esingumahluko kunye numahluko kwiimarike ojolise kuzo.
Abadlali abaphambili abagutyungelwe yingxelo yentengiso ye-PVC ye-BASF SE, Arkema, Baerlocher GmbH, SONGWON, Pau Tai Industrial Corp., Akzo Nobel NV, Clariant, Addivant, Valtris Specialty Chemicals, AKCROS CHEMICALS, PATCHAM (FZC), Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd., Chemson Ltd phakathi kwabanye abadlali basekhaya nakwamanye amazwe. Idatha yesabelo sentengiso iyafumaneka kwihlabathi liphela, eMntla Melika, eYurophu, eAsia-Pacific (APAC), Middle East naseAfrika (MEA) nase Mzantsi Melika ngokwahlukeneyo. Abahlalutyi be-DBMR bayawaqonda amandla okhuphiswano kunye nokubonelela ngohlalutyo lokhuphiswano kukhuphiswano ngalunye ngokwahlukeneyo.
Ixesha Post: Jun-19-2020
Umenzi wobuchwephesha bePVC oQeqeshiweyo oqhutywa ziiKhemikhali zoMgangatho oPhezulu, iNkonzo yokuThengwa kwabaNtu, iNyango kunye nokuThembakala.
I-GUANGDONG HUALONGYICHENG INCWADI ENTSHA YOBUGCISA BOBUGCISA., LTD.